Koronainformasjon på somalisk | Brobygger
Koronainformasjon på somalisk
Koronainformasjon på Tigranja
Workshops for økt foreldrekompetanse
Workshop for minoritetsforeldre
Fagseminar i kulturkompetanse
Verdier, visjon & Verktøy
Video på somali/tigrinja
+47 468 35 394
Koronatelefon på somali: 93947035
Waxaa waajib ah qofka uu ku dhaco cudurka faafa ee Covid-19 inuu joogi guriga oo galo gooni-u-bixid. Taas oo macnaheedu yahay in aad u dhawaanin dadka kale, xataa dadka aad la deggan tahay guriga. Si looga hortago is qaadsiinta cudurka, waa in dadka koroonadu ku dhacay laga dhex saaro dadka kale (gooni-u-bixid). Dadka loo malaynayo in ay qabaan cudurka waa in ay galaan karantiil.
Haddii dhaqtarka ama degmada aad deggan tahay kuu sheegaan in aad gasho karantiil ama gooni-u-bixid, waa in aad raacdid xeerarka iyo talooyinka ku saabsan arrintaas. Qofkii raaci waaya waxa lagu ciqaabi karaa ganaax lacag ah ama xabsi.
Waxa haboon in aad keligaa joogtid qol, ku cuntaysid qolkaas oo weliba haddii aad awoodo dadka kale la wadaagin qubeyska, suuliga ama jikada. Dibedda ma u bixi kartid. Haddii aad heli karin meel ku haboon in aad joogto xilliga gooni-u-bixida, waa in degmadu kaa caawiso in aad meel hesho. Gooni-u-bixida waxaad ku jiraysaa ilaa inta dhaqtarku kuu sheegayo in aad dadka kale qaadsiin karin cudurka. La xidhiidh dhaqtarka ama cisbitaalka degdegga/legevakt (telefoonku waa 116 117) haddii aad dareemayso xanuun sida in neeftu kugu dhageyso ama u baahan tahay gargaar caafimaad. Dadka qaar ayaa aad u xanuunsada oo la geeyaa cisbitaal.
Haddii laguu sheegay in lagaa helay koroona, waxa ku soo wacaya degmada si ay u sameeyaan waxa aannu u bixinay "raad-raaca cudurka" oo u ah muhiim joojinta cudurka. Dhammaan dadka guriga kula deggan, iyo dhammaan dadkii aad isu dhawaateen maalmihii u dambeeyey, waa in ay galaan karantiil. Waxa aad codsan kartaa turjumaan haddii luuqaddu kugu adkaato. Turjumaanku waa bilaash. Hadii aad wax suaal ah qabtid la xariir koronatelefanka ee Brobyggersenterka ama telefanka dowlada oo aad ka heli doontid qof afsomali kugula hadlo. Waa kuwaan lanbarada: 93947035 ama 81555015, kaidbna taabo 9+4
Waa maxay karantiil?
Haddii aad ogaatid in aad u dhawaatay o aad la joogtay waqti ka badan 15 daqiiqo 48 sacadood ee ugu danbeeysay qof qaba cudurka waa in aad gasho karantiil. Sidoo kale haddii aad Norway gashid ka yimid waddan kale. Macnaha karantiilku waa in aad masaafo wacan ka fogaatid dadka kale, xataa kuwa guriga kula deggan si uusan u gaarin hadii aad lacala qabtid cududrka. Marka la soo galo Norway dibada waa in dadka badankoodu dhowr maalmo joogaan hoteel karantiil, oo lacagtana iska bixiyaan ( 500 kr.maalinkii). Haddii aad karantiilka ku gelayso guriga, waxa wacan in aad haysato qol kuu gaar ah, isla markaana aanad joogin qolalka la wadaago marka ay dad kale joogaan meesha. Karantiilku waxa uu caadi ahaan soconayaa 10 maalmo laga bilaabo markii aad soo gashay Norway ama markii ugu dambaysay ee aad u dhawaatay qof qaba cudurka.
Markii aad karantiil ku jirtid ma aadi kartid iskuul, shaqo ama ma ka qaybgeli kartid sida jimicsiga ama kulan. Isla markaana ma raaci kartid gaadiidka dadweynaha (bas, tiriig, t-bane, tareen, diyaarad ama doon). Socod lug ah dibedda waad ku soo mari kartaa, laakiin waa in aad 2 mitir ka fogaatid dadka kale. Waxa wacan in dad kale kaaga soo adeegaan dukaanka ama aad dalbato cunto albaabka laguu soo dhigayo. Haddii aad ku qasban tahay in aad soo iibsato cunto ama dawooyin, waa aad samayn kartaa, laakiin waa in aad markaa dadka ka fogaatid oo aad isticmaasho af-dabool. Waxa wacan in aad tijaabo iska qaado marka karantiilku bilaabmo, maalinka sadaxaad iyo maalinka 7ad ama ka hor intaanu dhammaan, iyo isla markiiba haddii aad iska dareento calaamadaha koroonada. Tijaabada koroonadu waa bilaash. Haddii aad iska dareento calaamadaha koroonada adiga oo ku jira karantiil waxa suurtagal ah in aad qaaday cudurka. Waa in aad ku jirto gooni-u-bixid ilaa inta aad helayso jawaabta tijaabada. La xidhiidh dhaqtar haddii aad xanuunsato ama u baahan tahay gargaar caafimaad adiga oo weli sugaya jawaabta tijaabada. Haddii tijaabo la qaaday ay sheegto in lagaa waayey cudurka iyadoo tijaabada la qaaday markii ay ugu yaraan 7 maalmo ka soo wareegtay markii aad soo gashay Norway ama aad u dhawaatay qof cudurka qaba, isla markaana aanad qabin calaamadaha cudurka, waxa kaa dhammaaday waqtigii karantiilka.
Waa maxay karantiilka sugitaanku?
Haddii aad guriga la deggan tahay qof cudur-u-dhawaade ah (qof u dhawaaday qof cudurka laga helay) waa in aad gasho karantiilka sugitaanka ilaa inta cudur-u-dhawaaduhu helayo jawaabta tijaabada ee ugu horraysa. Haddii tijaabada laga qaaday qofkaasi sheegto in laga waayey cudurka, waa aad ka baxaysaa karantiilka sugitaanka. Haddii tijaabada qofkaasi sheegto in laga helay cudurka, waa in aad gasho karantiil caadi ah oo waqti dheeraad ah soconaya (kor eeg). Haddii cudur-u-dhawaadaha aad la deggan tahay ka yar yahay 2 sanno jir, ama sababo kale dartood tijaabo looga qaadi karin isaga ama iyada, waxa aad ka bixi kartaa karantiilka sugitaanka haddii aad tijaabo iska qaado marka ay ugu yaraan 3 maalmo ka soo wareegto markii ugu dambaysay qofkaasi u dhawaaday qof cudurka laga helay. Waa aad ka bixi kartaa karantiilka sugitaanka marka cudur-udhawaadaha aad la deggan tahay ka baxo karantiilka. Haddii cudur-u-dhawaaduhu dareemo calaamada cudurka xilliga uu ku jiro karantiilka, waxa suurtagal ah in qofkaasi qaaday cudurka. Markaa maadaama aad la deggan tahay qofkaas waa in aad karantiil gasho ilaa inta qofkaasi iska qaadayo tijaabo sheegaysa in cudurka laga waayey. Haddii aad ku jirto karantiilka sugitaanka waxa la rabaa in aad raacdo talooyinka loogu talogalay qofka ku jira karantiilka. Waa in aad guriga joogto, oo aad masaafo wacan ka fogaato dadka waaweyn iyo carruurta waaweyn ee guriga kula deggan. La soco wararka cusub! Dawladdu waxay dhammaan dadka deggan Norway ka codsanaysaa inay akhriyaan macluumaadka iyo talooyinka muhiimka ah ee ku saabsan fayraska koroona oo laga helayo www.fhi.no iyo www.helsenorge.no. Markasta waxa imanaya talooyin cusub. Macluumaadku wuxu ku qoran yahay dhowr af. Talooyin kala duwan ayaa ka jiri kara degmooyinka. Markaa waxa muhiim ah in aad la socotid waxa ka jira degmada aad deggan tahay. Haddii ay kugu adkaato in aad fahanto macluumaadka waxannu kaa codsanaynaa inaad raadsato qof kuu turjuma.
Øvre Slottsgata 3, SoCentral, Oslo
Tel: +47 468 35 394
Mobil: +47 417 42 152
© 2020 by Face 2 Face Brobyggersenter